Yintoni Rikoooo? - Rikoooo
Rikoooo.com yi Website French enikelwe yokulinganisa icomputer (kwi PC), ikakhulu ijolise kwi-Microsoft software «Flight Simulator» and Lockheed Martin «Prepar3D», ezinye iziqalelo ngokuphathelele Laminar Research «X-Plane».
Sinikezela ngaphezu kwewaka Khuphela moya, seaplanes, ntaka neziwuza onke amaxesha, ngokunjalo sceneries nakumacandelo ahlukeneyo, ezi fayili ezixhotyiswe installer oluzenzekelayo eya kuvumela ukuba ufake zonke zethu Izongezelelo kwi ngokucofa kanye! Le ndlela ufakelo lula kuya kongela wena ixesha elininzi kunye umahluko kwezinye Websites Ukukhuphela yokusabela Simulator kuthi.
Thina khetha, ukuphucula oluchanekileyo okukhulu inkathalo add-Izongezelelo. Zonke Izongezelelo zethu zilungele ukusetyenziswa Simulator yakho yokubhabha. Ezininzi iifayile ilayisenisi Freeware uze kwimithombo ezahlukileyo Web okanye ngokuqhagamshelana ngqo womnatha lethu elikhulu ababhali.